Alpenglow Rima richawanikwa paLinux kutanga neFirefox 88 | Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | Updated on 19/03/2021 15:37 | Noticias
Vakatora nguva yakareba, asi, sezvavanotaura, haina kumbononoka kana mufaro wacho wakanaka. Uye, kune vazhinji hauzove mufaro mukuru, asi kune vamwe unenge uri mweya wekufema, kana ivo vanongofara kuziva kuti, pakupedzisira, iyo rima vhezheni yeAlpenglow ichashanda paLinux. Kune avo vakarasika zvishoma, iwo musoro unowedzerwa neMozilla nekukasira senge sarudzo mu Firefox 81, isingasviki mwedzi mitanhatu yapfuura, uye yaisakwanisa kushandiswa paLinux.
Zvinotaridza senge, paive nebug kuti yakadzivirira dingindira kubva pakuona kuti yedu yekushandisa sisitimu yaishandisa rima theme, yaive nzira iyo yakaitwa nayo; kana tikashandisa dingindira rakareruka, "ganda" rine ruvara rweFirefox raigona kushandisa theme, asi kana tikashandisa dingindira rerima, rinozosviba. Kunyanya, Alpenglow inoshandisa yepepuru / bhuruu kumashure, nepo mumusoro tinokwanisa zvakare kuona pinkish mavara, asi ivo vakangwara mune yerima vhezheni.
Alpenglow, iro rine ruvara rweFirefox ganda munguva pfupi kusvika ku100% paLinux
Alpenglow inoshanda seyeyeyeki theme mune izvi, nemusiyano uyo iwo mavara haana kusviba zvakanyanya. Inoyeuchidza zvishoma nezverima zvakajairika reTwitter kana StartPage, nemusiyano wekuti Firefox theme ine yakati wandei ruvara. Ndakaverenga mumaforamu eMozilla kuti paive nevashandisi vaida kushandisa iyi sarudzo, uye havana kana kunzwisisa kuti sei vasina kuwedzera mukana wekukwanisa kuita shanduko yemanyorero, asi chinangwa ndechekuti chinoshanduka pamwe nekugadziriswa kwemidziyo. , chinhu chinobhadharisa njere kana isu takaita sarudzo iyo inoita kuti dingindira rishanduke zvichienderana nenguva yezuva.
Kune rimwe divi, ini ndinorangarirawo kuverenga vashandisi avo vakati ivo havana hanya, ivo vakasarudza iyo yekutanga rima tema. Ini ndaive pakati pemafungiro maviri: kune rimwe divi, ini ndaida kushandisa Alpenglow Rima, uyezve ndanga ndichiishandisa paWindows uye macOS kubva kuFirefox 81, asi ini handizive kana ini ndichizopedzisira ndaneta uye kudzokera kune yakasarudzika tema tema. Ichokwadi zvakare kuti mamwe emashoko aya aiita senge nyaya yegava uye mazambiringa: "hazvina kuibva," akadaro gava, asi sechikonzero chekunzwa zvirinani nekuziva kuti aisakwanisa kusvika.
Uye ndirini patinogona kunakidzwa Alpenglow Rima paLinux? Zvakanaka, pakange pasina chirevo chepamutemo, asi iri kutoshanda muFirefox 88, parizvino mu Husiku chiteshi. Kuva dingindira rimwe chete uye kwave kuwanikwa paWindows uye macOS kwemwedzi mitanhatu ikozvino, handioni chikonzero nei Mozilla ichinonoka chimwe chinhu chakadai, saka ndingati tinogona kuchishandisa kubva Kubvumbi 20, apo 88th Fox browser vhezheni kusvika kusunungurwa zviri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Alpenglow Rima richawanikwa paLinux kutanga neFirefox 88